Billboard Mockup | Famoronana an-tserasera
Alaivo sary an-tsaina hoe tonga ny mpanjifa iray ary mangataka anao hamolavola sary maneho ny orinasanao satria hatao dokam-barotra amin'ny takela-by izany (eny, ireo izay hitantsika matetika rehefa mitondra fiara). Araka ny habeny, ny zavatra tiany ary rehefa atolotrao azy dia mijanona mangatsiaka izy. Fantatrao ve ny anton'izany? Satria tsy nampiasa takelaka fanaovana dokambarotra ianao, izany hoe nomenao azy ny endrika fa tsy ny fahafahana mijery ny mety ho endrik'ilay takelaka tena izy.
Y izany no zava-bitanay amin'ny mockups takela-by, omeo zava-misy ny endrikao ary alaivo sary an-tsaina amin'ny mpanjifa ny ho endrik'izany rehefa apetraka eo amin'io fefy io. Ahoana anefa no ahafahanao manao izany?
1 Inona no atao hoe fanesoana
2 Inona no tokony hotadidinao amin'ny fanamboarana takelaka fanaovana dokambarotra
3 Aiza no ahazoana mockup billboard
3.1 Sky Billboard Mockup
3.2 Jereo eto ambany
3.3 takela-by an-dalambe
3.4 Mockup ny fefy amin'ny trano
3.5 Mockup mifanentana
3.6 Preview fefy ivelany
Inona no atao hoe fanesoana
Amin'izao fotoana izao, mety efa manana hevitra momba ny dikan'ny mockup ianao. Fa mba hanazavana kokoa, dia holazainay aminao fa miresaka momba ny fanehoana mahatoky araka izay azo atao amin'ny zava-misy momba ny famolavolana. Raha ny mockup amin'ny takela-by, dia miresaka momba ny sarin'ny takela-by izay, fa tsy ny dokam-barotra mahazatra, dia maka ny endrika noforoninay mba hahafantaran'ny mpanjifa ny endriny sy ny mety ho lesoka na lesoka tokony ho. ialana .. Ohatra, ny hazo mandrakotra ny ampahany sasany amin'ny famolavolana, ny faritra tsy misy hazavana, sns.
Na ahoana na ahoana, Ny mockups dia manampy antsika hanolotra endrika izay mety hahomby kokoa ho an'ny mpanjifa (satria tsy omenao ny design mihitsy, fa fanehoana ny fomba hijerena azy); miaraka amin'izay koa, manampy ny mpamorona hanafoana ny olana rehetra mety hitranga (ireo izay notantarainay taminao) ary na dia ny fanolorana safidy mahazatra sy ny hafa izay mety hisarika ny saina be dia be.
Ny fanomezana ny tena zava-misy amin'ireo endrika ireo dia manomboka amin'ny efijery saika mankany amin'ny tena fiainana, indrindra raha lazain'ny mpanjifa aminao ny toerana hametrahany ny takelaka ary azonao atao ny maka sary azy.
Inona no tokony hotadidinao amin'ny fanamboarana takelaka fanaovana dokambarotra
Na dia tokony hifanaraka amin'ny filana mitovy aza ny endrika dokam-barotra, dia ny fanaovana dokam-barotra vokatra, Raha ny takela-by, satria lehibe kokoa izy ireo ary hita lavitra kokoa, dia tsy maintsy mitandrina tsara amin'ny antsipiriany.
Raha ny marina dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana hita maso (sy izay halehan'ny mason'izay mahita azy) mba hisarihana ny saina. Raha tsy izany dia tsy hisy vokany tsara izany. Tsy mety koa ny mametraka zavatra be loatra amin'ny famolavolana, satria ho very ny sain'io olona io.
Farany, ny habeny dia tsy maintsy raisina. Tsara kokoa ny manasongadina ny vokatra, ny fehezanteny amin'ny zavatra iray na roa noho ny fitambarana iray manontolo.
Aiza no ahazoana mockup billboard
Koa satria fantatray fa tsy ho afaka hanana ny sarin'ny takela-by izay hanaovany dokam-barotra foana ianao, dia tsy maharary ny manana safidy fandokoana takelaka hafa. ianao ve Hanampy amin'ny fampifanarahana bebe kokoa amin'ny famolavolanao izy ireo. Aiza anefa no hahazoana azy ireo?
Manana safidy roa ianao: maimaim-poana, izay misy fetra bebe kokoa; ary nandoa, izay mety ho lafo amin'ny vidiny mora indrindra ho an'ny hafa izay hatoronay raha tena manana mpanjifa toy izany matetika ianao, satria mety tsy hanonitra ny fampiasam-bola.
Eto izahay dia mamela anao ny sasany amin'ireo izay nodinihinay fa afaka manompo anao.
Sky Billboard Mockup
Manomboka amin'ny famolavolana isika Mampahatsiahy antsika ireo takela-by izay miseho amin'ny sarimihetsika ara-panatanjahantena izay toa goavana izy ireo. Eny ary, zavatra mitovitovy amin'izany no tiantsika hitranga, mba hahitan'ny mpanjifa ny famolavolana azy ary hieritreritra hoe aiza no hametrahany azy, ahoana ny fijery azy.
Azonao atao ny misintona azy maimaim-poana eto.
Jereo eto ambany
Ity misy mockup hafa amin'ny takela-by izay ahafahanao mahazo hevitra satria manome anao ny fandrefesana marina an'io takelaka io ihany koa.
Manana ianao jereo avy any ambany, tsara kokoa lazaina, avy eo afovoany satria azo antoka fa ho ambony lavitra noho ny amin'ny sary ho hitanao.
Raha te hanana fomba fijery hafa ianao, ary mifantoha amin'ireo takela-by hitanao eny an-dalana, dia tokony hanandrana ity iray ity izay manome anao fahitana hafa ianao.
manana azy io ianao eto.
Mockup ny fefy amin'ny trano
Any amin'ny tanàna maro, indrindra fa ny lehibe kokoa, dia manana trano nohofany hametrahana sora-baventy mba hisarihana ny saina avy lavitra (ara-dalàna amin'ny trano manatrika lalambe, lalambe, sns) ary mazava ho azy fa ohatra amin'izany ity mockup ity.
Ahoana raha manontany anao ny famolavolana amin'ny lamba roa izy ireo? Izany hoe, takela-by roa mifanipaka (Ohatra, fa ao amin'ny iray misy fanontaniana ary ao amin'ny iray hafa valiny. Eny, azonao atao koa ny mampiseho izany amin'izy ireo, koa amin'ny sary mitovy.
Azo amboarina izy ireo ary azonao ovaina ny napetraka mba hampifanaraka azy amin'izay tianao hatolotra amin'ny mpanjifanao.
Ampidirinao izany eto.
Preview fefy ivelany
Ohatra iray hafa azonao ampiasaina hanehoana ny mpanjifa ity mockup fefy ity. Miaraka aminy ianao dia afaka manome azy fomba fijery hafa.
Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy manoro iray izahay, fa safidy amin'izy ireo hatramin'ny nahitanay azy Pinterest izay manana fitambarana takelaka misy endrika samihafa mba hahitanao izay tianao indrindra.
Maro amin'izy ireo no an'ny lahatsoratra ary azonao atao ny manara-maso azy ireo mba hisintonana ireo rakitra manokana.
Avelanay eto ianao rohy izay efa hitantsika.
Raha mijery kely amin'ny Internet ianao dia afaka mahazo ohatra maro kokoa ary loharano azo ampiasaina izy ireo. Ka raha mpamorona ianao na miatrika ity tetikasa ity amin'ny fotoana sasany, dia ho tonga lafatra izy ireo rehefa tonga amin'ny fampisehoana ny endrikao amin'ny mpanjifa, ka manome azy io ho zavatra tena izy. Mbola misy mahafantatra hafa atolotrao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Billboard Mockup
Fitaovana hamantarana typography
Ny maha-zava-dehibe ny famolavolana sary amin'ny varotra